Ụgbọ elu Saudia, Emirates, Etihad Airways na Jamaica - mgbanwe ntụgharị?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Saudia, Emirates, Etihad Airways ụgbọ elu na Jamaica - mgbanwe nke njem?
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya • News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Saudia, Emirates, Etihad Airways ụgbọ elu na Jamaica - mgbanwe nke njem?
Mgbanwe njem na -eme ugbu a site na iji ụgbọ elu ọhụrụ na -aga Jamaica. Ụgbọ elu si Dubai gaa Montego Bay ma ọ bụ Kingston na Emirates, site na Abu Dhabi na Etihad, ma ọ bụ ụgbọ elu si Jeddah ma ọ bụ Riad gaa Jamaica na Saudia?
Enwere ike ịhazi ụgbọ elu ndị a ka ha jikọọ na Jamaica ruo Bahamas, St. Lucia, St. Martin, Dominican Republic, Trinidad & Tobago na ebe ndị ọzọ na -ekpo ọkụ ezumike Caribbean? Minista Bartlett nke Jamaica na Ahmed Al Khateeb si Saudi Arabia na -esi nnukwu ihe.
Jamaica nwere ike ịbụ ebe ụgbọ elu maka Caribbean na-ejikọta na ahịa ọhụrụ gụnyere United Arab Emirates, ma ọ bụ Saudi Arabia.
Alaeze nke Saudi Arabia abụrụla ebe ndị njem ụwa na-ekpo ọkụ. Site n'enyemaka ntakịrị, Jamaica nwere ike ịbịa bụrụ isi maka njem nleta Caribbean.
Saudi Arabia nwere ego na njikọ. A na -ahụ Jamaica dị ka onye na -amalite usoro njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ. Mmekọrịta ọhụrụ na -emeri na -eme, na ikekwe na ọsọ ọsọ.
Mgbanwe nke ụdị Bob Marley nwere ike mee anwansi ahụ. Oge ọhụụ nke ohere njem nlegharị anya ka malitere na Jamaica, mgbe a hụrụ Minista njem nlegharị anya nke alaeze Saudi Arabia AH Ahmed Al Khateeb ya na onye ọbịa ya, onye minista na -ahụ maka njem maka Jamaica, HE Edmund Bartlett. Ndị ozi abụọ a yi okpu baseball na -egosi "mgbanwe".
A njem na njem nlegharị anya, Bob Marley ịke? Saudi na Jamaica Minister of Tourism nwere ọhụụ.
Saudi Arabia aghọwo ebe dị ọkụ maka njem nlegharị anya ụwa. UNWTO mepere isi ụlọ ọrụ mpaghara na Saudi Arabia, otu a WTTC na Global resilience & Nsogbu Management Center nwere ike iso.
Mara maka mgbe niile na-eche nke igbe na-enwe a global mindset na Mịnịsta nke njem maka Jamaica, Onye Hon. A hụrụ Edmund Bartlett ka ọ na -amụmụ ọnụ ọchị mgbe ya na Onye isi ala Ahmed Al Khateeb bụ Minista njem nlegharị anya nke alaeze Saudi Arabia. Onye ozi Saudi ahụ nọ na Jamaica maka nzukọ mpaghara mpaghara 66 nke emechiri na nso nso a nke World Tourism Organisation.
Nke a bụ ohere iji kpaa maka enwere ike njikọ ikuku n'etiti Caribbean na mpaghara Ọwara. Njikọ ikuku dị otú ahụ ga-abụ ohere maka Jamaica na ndị ọzọ nke Caribbean iji guzobe ohere a na-ahụtụbeghị mbụ iji jikọta Middle East, India, Africa, Asia na njikọ ikuku ikuku na Caribbean. Jamaica nwere ike ibu ụgbọ elu ụgbọ elu na feeder flights si ọzọ Caribbean mba jikọọ.
Nke a agaghị eme ka ahịa ndị ọhụrụ na-emepe Caribbean, kamakwa ọ na-eme ka njikọta n'etiti mba ndị agwaetiti.
Barlett kwuru maka nzukọ ya na onye ozi Saudi: “Anyị kwurịtara maka njikọ ikuku na otu esi ejikọ Middle East, ahịa Eshia, na mpaghara dị n'akụkụ nke ụwa ahụ. Anyị kwuru maka ụgbọ elu mega dị na mpaghara ndị ahụ. Karịsịa Etihad, Emirates na Saudi Arabia Airlines. "
N'ihi ya, alaeze Saudi Arabia na Jamaica bịanyere aka na nkwekọrịta nke ebumnuche. Nke a bu nke akuko eTurboNews na Fraịdee.
Ihe ọ drinkụ drinkụ (enweghị mmanya)
"Nkwekorita nke Minista Al Khateeb ga-eweta na tebụl bụ ndị isi ndị isi ụgbọ elu, ebe m ga-ahụ maka ịhazi mba ndị na-akwado anyị na usoro njem njem ọtụtụ ebe, iji mee ka Hub. Inwe ụdịrị ebe a na ahịa Jamaica nwere ike isi na Middle East pụọ wee bata na mpaghara anyị wee kesaa site n'otu mba gaa na nke ọzọ, ”ka ọ gbakwụnyere.
Bartlett na-eche na ụzọ a ga-esi nweta ọtụtụ njem dị oke mkpa maka mmepe nke njem na mpaghara ahụ ma mee ka ahịa ahụ gbasaa iji mepụta oke oke dị mkpa iji dọta ụgbọ elu buru ibu na ndị na-eme njem nlegharị anya ka ha nwee mmasị na Jamaica na mpaghara ahụ.
Ọ bụghị naanị banyere njikọ ikuku site na ọnụ ụzọ ámá dị na UAE, ma ọ bụ Saudi Arabia na Jamaica. Ọ bụ ohere ụgbọ elu ndị na-enye nri site na India, Africa, Central na South East Asia site n'ọnụ ụzọ ámá Gulf ruo Caribbean na-enweghị nchegbu maka usoro iwu visa US.
Jamaica nwere ike bụrụ njem na ebe azụmaahịa zuru ụwa ọnụ maka mpaghara Caribbean.
“Nye anyị, nke a bụ onye na-agbanwe egwuregwu n’eme ya n’ihi na obere mba dịka Jamaica agaghị enwe ike ịnweta nnukwu ụgbọ elu dịka Emirates ụgbọ elu ma ọ bụ Saudia na-abịakwute anyị na ụgbọ elu na-enweghị isi. Agbanyeghị, anyị nwere ike irite uru na ụgbọ elu ndị a na-abata na mpaghara Caribbean, na-agbadata na Jamaica ma nwee nkesa na mba ndị ọzọ na mpaghara ahụ, “ka ọ kọwara.
Otu na -emeri ma na -agba egwu ikpeazụ
Al Khateeb kwenyesiri ike na iwusi njikọta n'etiti Middle East na Caribbean.
Onye ozi Saudi kwuru na Jamaica: “Anyị na ndị ọrụ ibe m kparịtara isiokwu dị oke mkpa na anyị na -akwado ịmepụta àkwà mmiri n'etiti Middle East na Caribbean. Ana m ekele Minista Bartlett maka ohere a ma na -atụ anya ịgbasa ụlọ ọrụ maka ịgbasa Middle East na Caribbean, "ka o kwuru.
Ndị ozi abụọ ahụ kwurịtakwara akụkụ ndị ọzọ enwere ike ịmekọrịta, gụnyere mmepe isi obodo mmadụ, njem nleta obodo na ịwulite ume n'ime mpaghara ahụ.
Bartlett kọwara, sị: “Otu akụkụ dị mkpa anyị tụlere bụ mmepe nke nkwụsi ike na njikwa nsogbu, yana nkwado dị ka ogidi dị mkpa nke a ga -ebu ụzọ kwughachi mgbake nke njem. Mana nke ka nke, mkpa ọ dị iwulite ikike n'ime mba nwere njem nlegharị anya dị ka ọkwọ ụgbọ ala nke akụ na ụba ha - mba ndị na -enweghị ego na ndị nwere ike ịkpaghasị. Anyị ga -ahụ mmekorita n'ime ụlọ ahụ site na ebe nkwụghachi azụ ebe a na Jamaica na ebe nkwụsi ike dị na Saudi Arabia, "Bartlett kwuru.
Ugbu a enweghị usoro iheomume maka echiche ndị a, mana n'ezie njem na -aga n'ihu na Jamaica na karịa - ọ nwere ike ọ bụghị naanị na ndị ọbịa North America na UK.
Hụ ọba foto pụrụ iche pịa nbudata download PDF